उत्तर कोरियाले किन मिसाइल परीक्षण गर्दैछ ? - Nepal Readers
Home » उत्तर कोरियाले किन मिसाइल परीक्षण गर्दैछ ?
उत्तर कोरियाले किन मिसाइल परीक्षण गर्दैछ ?
गत हप्तामात्र प्योङ्गयाङ्ग नजिकै होवासोङ् –12 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम परीक्षण गर्दै यस्ता कार्यहरु जारी रहने चेतावनी दिएको छ। सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विशेषज्ञहरुका अनुसार– उत्तर कोरियाले यस्ता परीक्षणहरुबाट नै उपलव्धी हासिल गर्ने विश्वास लिएकोछ।
सुरक्षाविद्हरुका अनुसार हाल गरिएका हाइड्रोजन बम लगायत होवासोङ् -12 बैलिस्टिक मिसाइलको परीक्षणका पछाडि उत्तर कोरियाका ४ नियतहरु हुनसक्छन्। जस अनुसार –
उत्तर कोरियाले एक उच्च स्तरको आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न चाहेको छ, अब अरु देशहरुले पनि बचावटका कार्यहरु गरेर अमेरिकालाई अल्झाइराख्ने प्रयत्न गर्नसक्ने छन् ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ – यस प्रक्षेपणको दुरगामी दुस्परिणामको भविष्यवाणी गर्न कठिनाई छ, तर तुरुन्तै भने यस प्रक्षेपणको प्रतिक्रयास्वरुप माथिउल्लेखित मुलुकहरुलाई केही हदसम्म नजिक ल्याउनसक्नेछ।
मृत्युसँगको हाम्रो सम्बन्ध बदल्दैछ कोरोना